လေနုအေး: ဒီနိုင်ငံက သက်ကြီးရွယ်အို
Posted by တန်ခူး at 4:13 PM
အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ကျော်သွားမယ့်အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကို အမှတ်ထင်ထင်ဖြစ်အောင် မီးမောင်းထိုးပြလိုက်နိုင်ပါတယ်။ တင်ပြပုံအရေးပါပုံကိုလည်း သတိထားလိုက်မိတယ်။
ဟုတ်ပါ့နော်။ စလုံးက..အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမူ ဖြစ်သင့်ပါရက်..မိအိုဖ အို တွေကို..စိတ်ရှည်သီးခံမူ သိပ် နည်းတာ တွေ့ရတယ်။ နောက်..လူငယ်တွေ ကိုပဲ..နေရာ ပေးလွန်းတယ်။ ပြောမိတယ်။ ဘယ်အလုပ်..မှာပဲဖြစ်ဖြစ်..၃၀- ၄၀ ကြားလူရွယ်တွေ ချည်းပဲ။ လူကြီး တွေ ဘယ်ရောက်ကုန် လည်း ဆိုတော့.. taxi driver တွေ hawker တွေ ပဲ ဖြစ်ကုန်တယ်ထင်တယ်။ age discrimination လို့ပြော ရမယ် ထင်တယ်နော်။ နောက်ပီး..အဘိုးကြီး အဘွား ကြီး တွေ အဲလို...တိုက်ခန်း လေး တွေထဲမှာ..အစုတ်ပလုပ် တွေ နဲ့..နေ နေ ကြတာ..အများ ကြီးပဲ ။ တခါ တွေ့ဖူးတဲ့..ဘိုးဘွား ၂ ယောက်ဆို..မနက်..သူများတွေ အလုပ်သွားချိန်.. ဓါတ်လှေခါး ထဲမှာ..တုန်၂ ချိ၂ နဲ့ အမြဲတွေ့တယ်.. တနေရာ အလုပ်သွားတယ်ပေါ့။ အမိုကို မှာ ။ နောက်ကြုံ တော့ Tampinese ရောက် တော့.. လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တခု မှာ..အဘိုးကြီး..စားပွဲ သိမ်း နေတာ တွေ့တော့..ဟော-ဟော..ဟိုအဘိုးကြီး ဆို ပြီး..၀မ်းသာ အား ရ လက်ညိုးထိုးရင်း..အမလေး..ဒီလောက် အဝေးကြီး ကိုလာ လုပ် ရတယ်လို့..သနားနေတာ..ဆက်သွား တော့မှာ..မလှမ်း မကမ်း ဘူတာဘေးမှာ..သူ့ အဘွားကြီးက..တစ်လျှူးလေးတွေ ထိုင် ရောင်းလို့။ ငိုချင် လိုက်တာ ဆိုတာ။
စကား မစပ်- အချစ် အကြောင်း တွေ လာငေးသွားတာ..ဘာ ရ သွားလည်း..အဟဲ..။
“အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်”၊ “ကြီးသူကို ရိုသေ၊ ငယ်သူကို သနား၊ ရွယ်တူကို လေးစား” ဆိုတဲ့ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ၏ မြင့်မြတ်သော ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိ ပါတယ်တန်ခူးရယ်.....
မြတ်နိုးကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ အချိန်ကို ဂျပန်မှာ ကြီးနေချင်တယ်။ နောက်မှရေးရမယ် ဒီက သက်ကြီးရွယ်အို အကြောင်းတွေကိုး။
မြန်မာပြည်မှာ အဘွားကြီးတွေ ဈေးရောင်းနေတာ ပိုက်ဆံတောင်းနေတာတွေ့ရင် အသက်ကြီးလာတော့ လှူတတ်လာတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ ကြီးကံကောင်းဖို့လဲ ဆုတောင်းတတ်လာတယ်။
၀ဋ်ဆိုတာတွေက လည်တတ်ကြတာ သူတို့တွေ အကြင်နာတရား မရှိကြပါလားကွယ်။
ကလေးတွေ ကို ခုကတည်းက သင်ခန်းစာပေးတဲ့ ပုံပြင်လေးတွေ များများပြောပြပေး အမရေ..။
အမရေးတဲ့ ဟန်ကို သိပ်ကြိုက်တယ်။
မတန်ခူးရေ.. ရေးထားတာလေးတွေ ဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာ နင့်ကနဲပဲ.. တို့ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမို့လား မသိဘူး။ မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုတဲ့ သားသမီးဟာ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဘူးလို့ လက်ခံထားတယ်။ ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောင်းပြောင်း သားသမီးကောင်းစားတာကို မနာလိုတဲ့ မိဘဆိုတာ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်ဘက်က သိတတ်တာတောင် မိဘကျေးဇူးဆိုတာ ဆပ်မကုန်ဘူးမို့လား.. ဒါကြောင့် အခုလို သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေ ဒုက္ခရောက်တာမြင်ရရင် စိတ်မကောင်းဘူး။ တိုင်းပြည်က တိုးတက်လာလေ လူတွေရဲ့ ဘ၀ဟာ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရှိမှ ရပ်တည်လာနိုင်မှာ။ ဒီမှာ ရှိတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ ရှေ့ရေးတော့ မသိဘူးပေါ့နော်.. ဒါပေမယ့် အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးကလည်း နည်းတယ်လို့ NHK ရဲ့ program တစ်ခုမှာ ပြောသံကြားဖူးတယ်။ အရင်တုန်းကဆို အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေက ဆေးခန်းသွားရင် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး..အခုတော့ အဲဒီ rule ကို ပြင်လိုက်တယ်လို့လည်း သတင်းမှာ ကြားမိတယ်.. ဒါကြောင့် တို့တွေ ရုံးမှာဆို သန့်ရှင်းရေး လာလုပ်ကြတဲ့သူတွေက အဖွားအရွယ်တွေပဲ။ အသက် ၆၀ ကျော် ၇၀ တွေပေါ့။ နောက်ပြီး လုံခြုံရေးဆိုရင်လည်း အသက် ၇၀ နီးပါးရှိနေတဲ့ ဖိုးဖိုးကြီးတွေ။ မနေ့ကလည်း store ဆိုင်ရဲ့ ငွေကောင်တာမှာ မြင်ခဲ့ရတဲ့ ဖိုးဖိုးကြီးကအတော်လေးကို အသက်ကြီးနေပြီ။ တုန်ချိတုန်ချိပဲ။ နောက်ပြီး ဒီမှာ Taxi driver တွေက အဘိုးကြီးတွေများတယ်။ သူ့တို့ကို ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်မှာဆို တော်ရုံ ဒီအရွယ်တွေ အလုပ်မလုပ်ကြတော့ဘူးလုိ့ တွေးမိတယ်။
ဒီမှာကလည်း နေ့စဉ်ဝင်ငွေမရှိရင် ရပ်တည်ဖို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ အတိုးတွေ အခွန်တွေက တက်နေမှာလေ.. ဒါကြောင့် တချို့ဆို homeless တွေ ဖြစ်ကုန်ကြေ၇ာ။ အိုဇာတာ မကောင်းဘူးလို့ပဲ ပြောရတော့မှာပေါ့...
ငွေကိုပဲ တန်ဖိုးထား ကိုးကွယ်ပြီး မိဘတွေကို ပစ်ပယ်တဲ့သူတွေ များလာတာ အရမ်းဝမ်းနည်းစရာပါ။
ကောင်းပါတယ်။ ဖတ်လိုက်ရတာ စိတ်မှာမကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ကို သတိပေးသလို ခံစားရပါတယ်။
နေ့ တစ်ဒူဝ မြင်တွေ့ နေရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ထပ်ပြီး မီးထိုးပြလိုက်သလိုပါဘဲ..။
တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ စိတ်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြောဆို ဝေဖန်ချင်စိတ်တွေ အများကြီး..။
ကိုယ်တတ်နိုင်တာလေး ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ဘဲ ကြိုးစား စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။
လာဖတ်ပြီးတာကြာပေါ့။ အခုမှ ခြေရာချလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အလုပ်လုပ်တဲ့ကိစ္စကို ဒီနိုင်ငံကို ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ စပြီး သတိထားမိပါတယ်။ သူတို့ သားသမီးတွေက ဒီလိုပဲ ကြည့်နေလားပေါ့လေ။ ဒါနဲ့ နီးစပ်ရာ မေးကြည့်တော့ ဒီလို အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာကိုက သူတို့အတွက် အထူးအခွင့်အရေး ပေးထားတာဆိုပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သူတို့ ဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲတဲ့။ ဘာမှမလုပ်ပဲနေရင် ရောဂါတွေ ပိုဝင်လာမယ် ဆိုပဲ။ တဖက်ကလည်း သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာ နှေးကွေးတာနဲ့ efficiency ကျတယ်။ အခုနောက်ဆုံးတော့ ဟော်ကာဆိုင်တွေမှာတော့ အန်တီ အန်ကယ်တွေ မတွေ့ပြန်ဘူး။ ပြည်ကြီးက ပြောင်းရွှေ့လာသူတွေ လုပ်ကြတာ များများလာတယ်။ သူတို့ကမှ အင်္ဂလိပ်လို ပြောမရ ဆိုမရနဲ့ ပိုခက်တော့တာ။
ဒီက အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အန်တီ အန်ကယ်တွေကို တွေ့တော့ ကိုယ့်ဆီက ဘုရားသွားကျောင်းတက် ဘိုးဘွားတွေကို သတိရတယ်။ (ကျပ်တည်းလာတဲ့ အခုခေတ်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း မလွယ်တော့ဘူး ထင်ရဲ့.။)
ဒီနိုင်ငံမှာ အိုရမှာ ကြောက်လာတယ်။ အသက်ကြီးလာလို့ စုငွေ အလုံအလောက် မရှိရင် ဒုက္ခပဲ။ ဆေးဖိုးဝါးခတွေကလည်း ကြီးတော့ တခုခုဆိုရင်လည်း စုဆောင်းငွေထဲက အလုံးအရင်းပါသွားမှာကို စိုးရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကြောက်လန့်ပြီး ကျန်းမာရေး အာမခံ ဘာအာမခံ ညာအာမခံတွေ လျှောက်ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်လည်း စုငွေက ပါးလာပြန်ရော။
တွေ့ နေမြင်နေကျပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ခိုးလို့ ခုလု ဖြစ်လွန်းလို့ ပါ ကိုပေါရေ…
မကေရေ.. အမှန်ပဲ… အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အရေးပါမှုကနဲလာတယ်… ကိုယ့်သားသမီးကို ဈေးကြီးတဲ့ကစားစရာဝယ်ပေးဖို့မနှမျောပေမယ့် အဖေအမေအတွက် ကျတော့ နှမျောတတ်ကြတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုက ကျွန်မတို့ နဲ့ ကျတော့ သူစိမ်းပြင်ပြင်…
အချစ်အကြောင်းတွေ ငေးပြီး ရတာယူလာခဲ့တာ… ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ပါလာတာလဲ အချစ်ပဲ…
ဟုတ်ပါတယ် နှင်းပန်းရေ… ဒါဂုဏ်ယူစရာပဲ မိုလား….
မြတ်နိုးရေ… တို့ ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံပဲပြန်ချင်တယ်… ဂျပန်က သက်ကြီးရွယ်အိုအကြောင်း ဝေမျှပါဦး… စောင့်ဖတ်နေမယ်… ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြီးပြင်းရတာဆိုတော့ သားလေးတောင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်မသိပါဘူး… ဆုံးမပဲ့ပြင်ရမှာက ကိုယ့်တာဝန်ပေါ့….
နုရေ… မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုတဲ့ သားသမီးဟာ ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲဘူးလို့
တို့ လဲ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်တယ်… တိုးတက်မှုရဲ့အားနည်းချက်တွေလား… ဒီမှာတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အတွက် ဈေးနှူန်းသက်သာတာကလွဲရင် ဘာမှ အလကားမရဘူး နုရေ…
မိဘဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တဂိုဏ်းတည်းထား ကိုးကွယ်ရတယ်ဆိုတာ သူတို့ မှာ မရှိဘူး ကောင်းကင်ကိုရေ…
ကိုတားမြစ်ထားသောရေ… မိအိုဖအိုတွေကို လုပ်ကျွေးပြုစုရခြင်းကိုက မင်္ဂလာတပါးပါ…
သက်ဝေရေ… ဟုတ်ပါတယ်… တဦးချင်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရင် အများကြီး အကျိုးရှိမှာပါ…
တူတူပဲ ပန်ရေ… ဒီနိုင်ငံမှာ အိုရမှာတကယ်ကြောက်တယ်… ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုတော့ ကိုယ့်သားဆီကတောင် မျှော်လင့်ချက်မထားဘူး… အိုရင် ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ရပ်တည်ဖို့ကိုယ့်အထုပ်လေးကိုယ်စုထားရတယ်… ပြည်ကြီးတွေက တကယ့်နေရာအနှံ့ ဖြစ်လာပြီး ၀ယ်လို့ ခြမ်းလို့ သိပ်မကောင်းတော့ဘူး… ၁ ၂ ၃ ၄ တောင် မပြောတတ်တော့ ဘယ်လို လုပ်မလဲနော်…
မြင်ကွင်း (၅) လောက်အထိ လူက ရင်မောမောနဲ့ ဖတ်လာရပြီးတော့မှ မြင်ကွင်း(၆)ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ နည်းနည်းလေး သက်သာရာရသွားတော့တယ်။ ကျနော် အံ့သြတာက စင်္ကာပူလို နိုင်ငံမျိုးမှာ အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာကို အံ့သြမိတယ်။ ဗဟုသုတ တမျိုးလဲ ရတာပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကိုတော့ ဒီဗွီဘီရုပ်သံ သတင်းမှာ တခါကြည့်ဖူးတယ်။ ဒါတောင် အခု တန်ခူးတင်တဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ ပါသလို အိမ်တွင်းရေး အခြေအနေတွေ မပါသေးပါဘူး။
ဒီနိုင်ငံမှာကျတော့ ခန္ဒာကိုယ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကိုပဲ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ တော်တော်လေးကို သက်တောင့် သက်သာရှိပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ အထီးကျန်ဆန်တာတွေ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ကျနော့်အိမ်နားမှာက ဘိုးဘွားရိပ်သာ တခုရှိတော့ တခါတလေကျရင် အဘိုးအို၊ အဘွားအို စုံတွဲတွေ တုန်ချိချိနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်နေတာ၊ သူတို့ အချင်းချင်းပဲ ဖေးဖေးမမနဲ့ လက်တွဲကူနေကြတာကို တွေ့ရတယ်။ တချို့ အဘိုးအဘွားတွေကျတော့လဲ ခွေးကလေး တကောင်နဲ့ အဖော်ပြုပြီး၊ လမ်းကလေး နည်းနည်းလျှောက်လိုက်၊ အဲဒီခွေးကလေးနဲ့ စကားတွေ ပြောလိုက်နဲ့ တွေ့ရတယ်။
ကိုစေးထူးရေ… ဟုတ်ပါတယ်… တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတခုမှာ ဒီလိုတွေ့ ရတာ ကျွန်မလဲ အံ့သြမိပါတယ်…
They are already animal, no more human inside them. Just the animal with the human skin. So sad for them...
လေနုအေးဆိုတာ မိန်းခလေးလား ယောက်ျားလေးလား မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်တွေ ရင်ထဲမှာ ထင်ဟပ်အောင် ပြသနိုင်တာကို အထူးပဲ လေးစားမိတယ်။ ကိုယ်ပိုင် လက်တွေ့ခံစားရတာလေးတွေ ဖတ်ရတာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ ကူညီချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ပြုပြင်ချင်စိတ်တွေလဲ ပေါက်ဖွါးလာစေပါတယ်။ စကားလုံးအသစ် ရှာမတွေ့သေးလို့ ကျေးဇူးပါနော် လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါရစေဗျာ
thz for pointing out
Hey Kaung Lay said...
I just saw your site. When I read your posts. I felt so many kinds of feeling. Yes, your post is very good. But as u know, It's the law of Kanma ( Law of Cause and Effect). I hope if you areabuddhist, you can understand what I mean.
Anyway, Thanks for for your post. And try to post more.
ကျနော်တို့လဲအမြဲမြင်နေရတယ်ဗျာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို MRT တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဒီလိုတွေမြင်နေရတာရင်မှာမချိပါဘူး လေနုအေး(အကိုလားအမလားတော့မသိလို့ဒီတိုင်းပဲခေါ်ချလိုက်ပြီနော်) ပြောတာမှန်ပါတယ် ကျနော်အမြင်တော့ စလုံးက အရှေ့တိုင်းရင်ကျေးမှူမရှိတာထက် ငွေကိုငမ်းငမ်းတက်နေတဲနိုင်ငံ ဖြစ်နေတယ်လို့ကျနော်ယူဆပါတယ် ပညာသာသင်နေရတာဗျာ လုံးဝမနေချင်ဘူး ပြန်ရမဲ့အချိန်ကိုပဲလက်ချိုးရေနေမိတယ်
I amastudent in Japan. Your posts are totally right as in Japan, I saw many places, very very old men and women are woking. Japan is developed totally but in our eyes, old people also have to work in Japan view makes me hurt. May be they want to be healthy and so, they do. It is only merely reason. The main reason is they have to do too according to high living cost in Japan.